Maddow — Steemit
အခြို့သောအဘို့, တနင်္ဂနွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်များအလုပ်ဘဝတွေကို၏ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေသန့်ရှင်းဆုတ်ခွာနေဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေအဘို့, တနင်္ဂနွေနေတဲ့ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပါသည် - စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေဟာ Workweek နှင့်ရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်၏ရဖို့အခွင့်အလမ်းများစွာမျှသာ extension များဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အမင်းအောင်မြင်တဲ့လူတွေကွာအလုပ်ကနေသူတို့ရဲ့ (အနည်းဆုံးသီအိုရီ) အချိန်ဖြုန်းအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေကနေတရားစီရငျကျနော်တို့ကယ့်ကိုသင့်ရဲ့တနင်္ဂနွေတညျဆောကျပုံခွင့်မရှိသောသို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့လမ်းလည်းမရှိကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်သည် - ကသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုချိန်ခွင်လျှာသပိတ်မှောက်အကြောင်းကိုအားလုံးပါပဲ။ ဤတွင်စူပါအောင်မြင်သောလူများကပြုပုံကိုပါပဲ။ Elon Musk ကသူ့ကလေးတွေနှင့်အတူအချိန်သုံးစွဲ Musk, SpaceX နှင့် Tesla ၏ဘီလျံနာ CEO ဖြစ်သူ, သူတနင်္ဂနွေထုတ်ဆွဲထားတဲ့, Mashable ပြောသည်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူငါးသား, ရှိပါတယ်။ သို့သော်သူလည်းဒီ
"အရည်အသွေးကိုအချိန်" ၏အချို့သောအီးမေးလ်များကိုပေးပို့သုံးစွဲကြောင်း 2013 ခုနှစ်အနောက်တောင်ပိုင်းအားဖြင့်တောင်အာရှမှာဝန်ခံခဲ့သည်။ "သူတို့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနေသည့်အခါ မှလွဲ. စဉ်ဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်မလိုအပ်ပါဘူးသောကြောင့်," ဟုပြောသည်။ "ငါသူတို့နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပြီးနေဆဲတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကိုရှာဖွေပါ။ " ဂျက် Dorsey တစ်ပတ် hikes နှင့်ပြင်ဆင် ဂျက် Dorsey Twitter နဲ့ Square ကိုအချိန်ပြည့်အပြေးသောအခါ, 2011 ခုနှစ်, ပူးတွဲတည်ထောင်သူကအားလုံးကိုပြုမိလေမှ, ထို Techonomy 2011 ခုနှစ်မှာပရိသတ်ကိုပြောသူတစ်ဦးချင်းစီနေ့ဆောင်ပုဒ်ကိုပေး၏။ ဒါကသူ့ကိုလျင်မြန်စွာမှတ်မိနှင့်အာရုံလမ်းထွက်ခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်ကနေ့ကိုရဲ့တာဝန်အပေါ် refocus ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့
ပါသည်။ Dorsey သူ, တောင်တက်နှင့်ထင်ဟပ်အာရုံစိုက်တနင်္ဂနွေဖြုန်းဖို့စနေနေ့ကိုချွတ်ယူတုံ့ပြန်ချက်, နည်းဗျူဟာများနှင့်ရက်သတ္တပတ်၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်အဆင်သင့်ဆိုတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ အခုတော့သူပြန်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးကို run ဖို့င်ကြောင်း, ဆောင်ပုဒ်ရက်ပေါင်းနောက်တဖန်နေရာလေးကိုအတွက်လာနိုင်တယ်လို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ရာခေလသည် Maddow တိုင်းပြည်အတွက်သူမ၏နယူးယောက်တိုက်ခန်း ditches နိုင်ငံရေးသတင်းစာဆရာသူမ၏ရည်းစားဆူ Mikula သူမကပြည်သူ့ပြောနှင့်သူမ၏အင်္ဂလိပ် Lab မှတစ်ဦး 275- sq. -ပေသိမ်းပိုက်။ တစ်ပတ်သည့်အခါ Maddow တိပ်ခွေသူမ၏ပြပွဲကာလအတွင်းမန်ဟက်တန်တိုက်ခန်း။ သူတို့အနောက်တိုင်းမက်ဆာချူးဆက်၌မိမိတို့တိုင်းပြည်အိမ်သို့ဆုတ်ခွာနိုင်အောင်ဟာတနင်္ဂနွေစဉ်အတွင်းသော်လည်း, သူတို့သည်သုံးနာရီမောင်းတယ်။
"မြို့အထွက်ရာအရပျထားရှိခြင်းသည်ငါလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သတ်မှတ်မှုဆီသို့တစ်ဦးဖြတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Maddow ပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ သူမလည်းရုပ်ပြစာအုပ်တွေဖတ်နေသူမ၏စနေနေ့ဖြုန်းချစ်တော်မူ၏။ လာမယ့် Read: ဤအားလုံးသည်အချိန် 10 အချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည် Bill Gates ကထွက် mellows တစ်ဦး Reddit AMA စဉ်အတွင်းမနှစ်ကဘီလျံနာ Microsoft ကပူးတွဲတည်ထောင်သူသူပဲမိမိသမီးစီးမြင်းများကိုကြည့်သည်သူ၏တနင်္ဂနွေသုံးစွဲခြင်းနှင့်အချို့အဟောင်းပျော်စရာခံစားခဲ့သောစာဖတ်သူများကိုပြောသည်။ "နှစ်ဆယ့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းငါတစ်ကြိမ်နေ့ရက်ကာလအဘို့ရုံးနေမယ်လို့ကအကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်မစဉ်းစား - ဒါကြောင့်ငါငါ့ဘက်မှာစွမ်းအင်နှင့် naivete ခဲ့," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "အခုဆိုရင်မျှော်လင့်ကျွန်မနည်းနည်းပိုပြီး mellow ပေမယ့်အနည်းငယ်ပိုဉာဏျပညာနှငျ့ဖြစ်၏။ " Arianna Huffington အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ငယ်များ သူမကစနေနေ့ကသူမ၏စာပုံးမှတဆင့်သွားကြဖို့ likes ဝန်ခံသည်သျောလညျး, ကို "ကြီးထွားလာ" စာရေးဆရာသူမရဲ့န်ထမ်းများအနေဖြင့်တစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ "ငါသည်ညဥ့်အချိန်တွင်တကျိပ်တပါးမှာအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါကငါ့အဖို့-do list ကိုကချွတ်မရင့်ပေမယ့်ကျွန်မပြန်ကြားချက်ကိုမျှော်လင့်ကြဘူး" ဟုသူမက Mashable ကပြောကြားခဲ့သည်။ "ထိုအခါငါအလွန်ရှင်းလင်းသောဖြစ်စေလျက်, ငါတနင်္ဂနွေကိုကျော်ဖြေကြားမှုများမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ " မာကုကျူးဘားကသူ့ကလေးတွေစာကိုလုယူဖို့မကြိုးစား အဆိုပါဘီလျံနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် "ငါးမန်း Tank" Co-အိမ်ရှင်သူနဲ့သူ့ဇနီးအထူးသဖြင့်တနင်္ဂနွေ, တတ်နိုင်သမျှပုံမှန်တစ်အိမ်မှာဘဝအဖြစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားသောပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအနောက်တောင်အားဖြင့်တောင်အာရှမှာပရိသတ်ကိုသို့ပြောသည်။ "ဟုအဆိုပါတနင်္ဂနွေတွင်ကျွန်တော်ဒါ TIFF နဲ့ကျွန်မစနေနေ့နံနက်ထွက်အလုပ်လုပ်သွားပါနံနက်ယံ၌ [တစ်ဦးထိန်း] ရှိသည်။ ထိုအခါတနင်္ဂနွေ၏ကျန်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုပါပဲ။ ဒါဟာအိပ်ရာသူတို့ကိုချပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပါပဲ။ ဒါဟာညစာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပါပဲ။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှပုံမှန်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ သငျသညျအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သူတစ်ဦးဦး၏မြေတပြင်လုံးစိတ်ကူး, ဒီနှင့်အကြောင်း, ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ " Malcolm Gladwell သည်ဖြည်းဖြည်းနင်္ဂနွေနေ့ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်လက်ဖက်ရည်ကိုသောက်သုံးရခြင်းကိုနှစ်သက်သူ အဆိုပါ "ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်" နှင့် "ဒါဝိဒ်နှင့်ဂေါ" ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ HBO နှင့်အားကစားကိုကြည့်သည်, မိမိတနင်္ဂနွေ, လက်ဖက်ရည်သောက်သုံးသတင်းစာဖတ်နေ, မနက်လည်စာတစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ထွက်သုံးစွဲလျက်, သူ HuffPost က Black Voices ပြောသည်အဖြစ်, "ငါ ငါပေးသောခဲ့တာသမျှသောသူတို့အဘို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ " စော်လဒက် O 'Brien အပျော်အပါးနှင့်အတူအလုပ်ပေါင်းဘော်ရောနှော အဆိုပါသတင်းစာဆရာ6a.m. မှာတနင်္ဂနွေအပေါ်နှိုးနဲ့9p.m. အားဖြင့်အိပ်ရာမှာဖြစ်ပါတယ် သူမသည်မကြာခဏထွက်အလုပ်လုပ်တယ်သူမ၏မေတ္တာအပေါ်အချိန်သုံးစွဲနှင့်မြင်းစီးခြင်းတတ်၏။ Sergey Brin အမျိုးမျိုးသော Acrobat သောအရာတို့ကိုမ မိမိအအားလပ်ချိန်မှာအချိန်အတွက်, Google ပူးတွဲတည်ထောင်သူသူစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဆိုလမ်းထဲမှာကန့်သတ်နိုင်ဖို့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တွန်းအားပေးရန် likes ။ ဤသည်ကြိတ်စက်ဟော်ကီ, အဆုံးစွန်ဖရီးစ်ဘီး, ကျွမ်းဘား, skydiving နှင့်မြင့်မားသောကောင်းကင်ဘားပါဝင်သည်။ အာဒံကို Nash ရက်စွဲများအပေါ်သွားသည် အဆိုပါ Wealthfront CEO ဖြစ်သူသူနဲ့သူ့ဇနီးနေ့စွဲညအတွက်ကြီးမားသောယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည် Quora အပေါ်ကပြောပါတယ်။ သူကညစာနှင့်အချိုရည်ကျော်နာရီအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်အံ့သြစရာအံ့သြဖွယ်င်ကပြောပါတယ်။ "တကယ်ကသင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအကြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားရှိပါတယ်မဟုတ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ဟုပြောသည်ခံရဒါကကျနော်တို့အားလုံးလူ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါသည်သင်တို့ကိုငါနင်္ဂနွေဖြုန်းအချိန်လူအများစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါအားသွင်းလမ်းကိုဖွင့်, ထိုသို့ကိုလည်းငါရှုထောင့်စောင့်ရှောက်လမ်းကိုဖွင့်။ " သူမ၏ကလေးတွေကိုနှိုးမတိုင်မီ Michele Turner အလုပ်ပြီးသွား ယခင် Dictionary.com CEO ဖြစ်သူပိတ်ပင်မှာထုတ်ကုန်အသစ်မဟာဗျူဟာ၏လက်ရှိဦးခေါင်း, သုံးယောက်မိခင်သူမကတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလမ်းထဲက "အလုပ်ပစ္စည်းပစ္စယ" ရဖို့ likes ကပြောပါတယ်။ သူမသည်အတွက်ပထမဦးဆုံးအရာအလုပ်လုပ်ကိုင်တဦးတည်းမှသုံးနာရီခန့်သုံးစွဲပါလိမ့်မယ်